Kulimale abangu-25 kuqhuma ibhomu esibhedlela | News24
Kulimale abangu-25 kuqhuma ibhomu esibhedlela
Bangkok – Kuqhume ibhomu esibhedlela sombutho wezempi eBangkok, eThailand, ngoMsombuluko, kugujwa iminyaka emithathu umbutho wezempi wavukela uhulumeni, nalapho amaphoyisa ethi bangu-25 abantu abalimele.
Abaphenyi bathole izingcucu zama-battery kanye nezintambo kuphansi endaweni okuqhume kuyo leli bhomu ePhramongkutklao Hospital, kusho uSrivara Ransibrahmanakul, oyiSekela leNhloko yamaphoyisa kuzwelonke.
“Singakuqinisekisa njengamanje ukuthi lelo yibhomu,” usho kanje.
OLUNYE UDABA:Kulimale umndeni waseThekwini kuqhuma 'iphasela'
Abantu abathathu balimale kanzima ebusweni nasemqaleni, kodwa iningi lezisulu zithole imihuzukwana, ngokusho kokhulumela uhulumeni, uSansern Kaewkumnerd.
Bekungakacaci ukuthi ubani oqhumise leli bhomu nokuthi lokhu kuhlobene yini nokugujwa kweminyaka emithathu umbutho wezempi wavukela uhulumeni owawukhethwe ngokwentando yeningi wawuqumba phansi.
“Ngicela ningakuhlanganisi lokhu nanoma ngabe yiziphi ezinye izigameko ngoba kungenzeka ukuthi kuhlangane noma akuhlangene,” uSansern usho kanjalo. “Kumele silinde izikhulu ziphenye imininingwane yamakhamera aqapha endaweni.”
IPhramongkutklao yisibhedlela esiphethwe umbutho wezempi kodwa esivulelekile nakubantu abajwayelekile.
Kusukela kwavukelwa umbuso ngonyaka ka-2014, okungenani aseyisithupha amabhomu aseqhume eBangkok.
Yize noma iningi lamabhomu aye adale ukulimala okungatheni, kodwa ibhomu elaqhuma ngomhlaka-17 ku-Agasti 2014, labulala abantu abangu-20.